Gịnị bụ ebe mkpọda ugwu na ihe e jiri mara ha | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị na-ekwu banyere slopes anyị pụtara ihe ọ bụla elu na chọrọ gbasara kwụ. E nwere ọtụtụ ụdị mkpọda ugwu, ma nke eke na nke artificial, ha nwere ike iburu ụdị nwa oge ma ọ bụ nke na-adịgide adịgide dabere na agwa ha.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe ụdị mkpọda ugwu bụ, etu esi akpụ ya na isi njirimara ha.
1 Main ụdị mkpọda ugwu
2 Kacha nkịtị ụdị mkpọda ọdịda
3 Ihe kpatara mmegharị
Main ụdị mkpọda ugwu
A na-ahụ ihu dị larịị dị ka mkpọda. E nwere ugwu ndị sitere n'okike nke nwere ihe aja ma ọ bụ okwute kpụrụ. N'aka nke ozo, enwere uzo ndi wuru awuru na simenti, asphalt ma obu ihe ndi ozo na eme ka enweghi obi iru ala site na nkpa ma obu nkasi obi.
Anyị ga-amata ọdịiche dị iche iche nke mkpọda ugwu:
Okike: bụ ndị e guzobere na okike site na mmiri dị iche iche na-arụ ọrụ na ala na akwa ụra.
Wuru: Ha bụ ndị e kere site n’aka mmadụ. Ha nwere ebumnuche iji nwee ike wuo okporo ụzọ, mmiri ozuzo, okporo ụzọ ụgbọ oloko, oghere, wdg.
Mgbe ebubere ya iji wuo mkpọda na mmiri ma ọ bụ na nkume ma ọ bụ na ala, ọ dị mkpa ịnwe nhazi tupu oge eruo yana ọmụmụ ihe zuru ezu. Naanị ị ga-eche na ọ bụrụ na anyị emepụta mkpọda iji nwee mmiri nke mmiri, kwuru, mkpọda ga-enwe ike ịkwado ịdị arọ nke mmiri na-enweghị imebi. Ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ na mmiri e gbochiri ada ada, mmiri niile nwere ike ịgbapụta ma metụta ọnụ ọgụgụ ndị bi na ndagwurugwu.
Ọdịdị mkpọda ga-enwerịrị njedebe na nyocha nke ọma. Nke mbu bu ka iwepu iwepu ulo. Dị ka anyị maara, n'elu mmejọ ahụ bụ mpaghara nke kachasị arụ ọrụ. Nke a nwere ike ime ka ala ọma jijiji na-ebibi ugwu. Otu n'ime isi ihe dị na imewe mkpọda bụ ntinye nke njirisi di iche iche nke iguzogide ihe. Ejiri ihe di iche wue ugwu. Have ga-atụnyere nguzogide nke ihe ọ bụla na nke ewuru, na-agbanwe ya na usoro ọ bụla nwere ike ịda.
Kacha nkịtị ụdị mkpọda ọdịda
Ndapu na ndumodu na-aputa site na ndapu nke ala ngwangwa. Omume a na-eme dị ka ahụ siri ike nke na-adaba na ihe kpatara ya. Nke a nwere ike imetụta nkwụsi ike nke mkpọda dị ukwuu. Anyị ga-enyocha nke kachasị ụdị ọdịda:
Ndida site na mbuze miri emi: ụdị mmejọ a dabere na ihu igwe na ihu igwe nke mpaghara ahụ. N’okwu a, ihu igwe ga-egosi oke mkpa mgbe ị na-arụ mkpọda. Ọ bụrụ na ihu igwe nke otu mpaghara na-ezo, ọ na-ebute ihe ndaba nke mbuze ugboro ugboro.
Mbibi ala na ugwu ugwu dị na mbara igwe dịbu adị: ọ na-adịkarịrị mfe mmejọ ịpụta na mkpọda nke ndagwurugwu na-amaliteworị. Mgbe ụfọdụ, nkwụnye ego ndị a dị na ihe ndị ọzọ siri ike.
Ndagide ije ọdịda: bụ ndị na-ewere ọnọdụ site na ngagharị nke mkpọda ma ọ bụ site na ndị ọrụ mpụga dị iche iche dịka mmiri ma ọ bụ ikuku.
Adiana odida: ọ bụ akụkụ gbagọrọ agbagọ nke usoro mkpọda na-ewere ọnọdụ.
Ntụgharị asụsụ ntụgharị: ọ na-ewere ọnọdụ tinyere ebe ndị na-esighị ike na ihe ndị na-adịghị eguzogide ọgwụ. Elu na-adịkarị ala ma ọ bụ na-agbanye ntakịrị.
Na-asọ: Mmiri a dị ka nke mmiri mmiri viscous dị ka lava ma ọ bụ mmanụ a honeyụ na ọ nwere ike ịpụta na mbara igwe.
Mbuze ọdịda: Ifufe na-aga n'ihu na ịdọrọ mmiri nwere ike ime ka elu daa. Ekwesiri iburu n'uche na ka nke a mee, ihe ndi oru uzo a gha adi ike ma gbasaa oge.
Liquefaction ọdịda: ọ na - eme mgbe o nwere ọdịdị siri ike karịa nke nkwụsịtụ.
Iburu ikike ọdịda: na-eme mgbe a na-ewu ihe owuwu nke nwere ibu ka ukwuu n’elu ihe mkpọda ahụ pụrụ ịkwado.
Ihe kpatara mmegharị
Mgbe anyị hụrụ ngagharị nke mkpọda, ọ dị mkpa iji nyochaa nke ọma ihe kpatara ya. Ka anyị lee ihe ha bụ:
Floorskwụ na-adịghị ala: Ha na-agbagakwa na ala ike nke ike ndọda ma ọ bụ ikike ndị ọzọ ma ọ bụ ibu ndị karịrị ikike njide.
Non-cohesive ala: ha bụ ala ndị ahụ granular udidi ma ọ bụ ezigbo aja nke nsogbu nke ya dị larịị. Ndagwurugwu ndị e wuru n’elu massifs ndị na-ejikọtaghị ọnụ ga-eguzosi ike ma ọ bụrụhaala na nkuku mkpọda bụ ihe na-erughị akuku nke esemokwu nke ime ájá ma ọ bụ nke granular.
Ndagwurugwu ndi sitere na ụdị dị iche iche. Ha bụ ugwu ndị na-adịkarịghị otu ma ọ bụ na-enweghị eriri. Ha anaghịkwa akwụsi ike na ya, ha na-achọkarị ikpo ala. Otu njirimara njirimara nke ugwu ugwu bụ na ha na-eweta nkụda mmụọ na mgbawa na-etolite isi adịghị ike na nhazi ahụ. Ya mere, a na-ekwu na ọ nweghị ụdị stratification ọ bụla.
Ala ndị a na-akpụkarị slopes bụ ala na-enweghị ntụ, ájá mmiri, apịtị na-etinye na ụrọ, ala nwere ụrọ ụrọ, na ala siri ike nwere ụrọ. Na mkpọda ugwu, ihe na-akpata mmegharị na-abụkarị isi ihe ndị a:
Ibelata mbipụta nke ihe
Mee ka porosity bawanye n'ihi oke mbuze
Ihe ndị a na-abawanye site na ụfọdụ ndị ọrụ na-ebu amụma ma na-akwado mmịfe. Ndị ọrụ a bụ nhazi ọdịdị ala, ọdịdị ala, mbara igwe, okirikiri mmiri, ike ndọda, ọdịiche dị na ọnọdụ okpomọkụ na ụdị ahịhịa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mkpọda ugwu na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ndagwurugwu
Oke osimiri nwụrụ anwụ